Arrin musuq lagu tilmaamay oo ka jirta diiwaangelinta musharrixiinta Madaxwaynaha | Hadalsame Media
Home Wararka Arrin musuq lagu tilmaamay oo ka jirta diiwaangelinta musharrixiinta Madaxwaynaha
Arrin musuq lagu tilmaamay oo ka jirta diiwaangelinta musharrixiinta Madaxwaynaha
(Muqdisho) 09 Maajo 2022 – Waxaa maalintii 2-aad soconaysa is diiwaangelinta musharrixiinta u taagan xilka madaxtinnimada dalka.
Diiwaangelinta musharrixiinta iyo shahaado siinta oo ay berri oo qur ihi harsan tahay ayaa waxaa la is waydiinayaa hal su’aal oo aan jawaab loo haynin.
Waa su’aal ku saabsan halka ay aadayso lacag lagu sheegay is diiwaangelin oo sanad kasta laga ururiyo musharrixiinta min heer xildhibaan ilaa musharrax Madaxwayne.
Tusaale, ilaa haatan waxaa is diiwaangeliyey 32 musharrax oo uu midkoodba bixiyey 40,000 oo doollar taasoo markii 32 lagu dhufto noqonaysa adduun ku dhow 1.3 milyan doollar (1,280,000), welina waa socotaa.
Dad xog ogaal ah oo aan waydiinney waxa lacagtan lagu qabanayo waxay iskaga gaabsadeen waxaa shaah ku cabaya Guddiga laakiin taasi micne samayn mayso oo guddiggu gunno ayuu qaataa mana aha inuu ka ganacsado doorashada ee waa in lacagtan lagu shubaa khasnadda ummadda oo aan wax adeeg ah loo qaban.
Previous articleRASMI: Sweden & Finland oo ku dhawaaqay taariikhaha ay go’aan ka gaarayaan ku biirista Gaashaanbuurta NATO
Next articleBahdil lagula kacay Danjiraha Ruushka u fadhiya dalka Poland & sida ay wax u dheceen (Daawo)